UPDATE: Al-Shabaab oo Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ku weeraray dalka Kenya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Al-Shabaab oo Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ku weeraray dalka Kenya
UPDATE: Al-Shabaab oo Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ku weeraray dalka Kenya
Milihoi (Halqaran.com) – Maleeshiyaadka Ururka Al Shabaab ayaa Axadii weerar kale ka gaystay Gobolka Xeebta Kenya, ka dib markii ay bartilmaameedsadeen shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, oo dhiseysa wadada xiriirisa Lamu iyo Garsen.
Ururka Al Shabaab ayaa weerarkan ka fuliyay Magaalada Milihoi oo ku taala wadada isu xirto Lamu iyo Garsen, halkaasoo ay ku gubeen laba ka mid ah gaadiidka xamuulka, ee qaybta ka ah dhismaha wadadaasi.
Irungu Macharia, Taliyaha Ciidanka Booliska ee Lamu ayaa sheegay in Shabaabkii weerarka soo qaaday, ay u carareen dhinaca keymaha Boni, ka dib is rasaaseen dhex martay iyaga iyo Booliska Kenya.
Taliyaha oo la hadlay Warbaahinta Kenya ayaa xaqiijiyay in maleeshiyada Al Shabaab, ay dab qabad siiyeen laba ka mida gaadiidka shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha.
Taliyaha ayaa sidoo kale xaqiijiyay inaanay jirin cid waxyeelo ka soo gaartay weerarkaasi, dhimasho iyo dhaawac toona.
Dhanka kale Irungu Macharia ayaa sheegay inay Ciidamada Kenya ka hortaggeen kooxdii weerarka soo qaaday, oo qorshahoodu uu ahaa inay weeraraan saldhig boolis oo ka ag-dhow wadada uu dhismuhu ka socdo.
5-tii bishii hore ee January ayay ahayd markii Al Shabaab ay weerar xoogan ku ekeysay Xerada Ciidamada Cirka Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ka hawlgalaan, ee ku taala Deegaanka Mandy Bay ee Gobolka Xeebta.
Al-Shabaab oo shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha ku weeraray dalka Kenya